Nzvimbo dzepamusoro gumi dzekuona nzvimbo muAustralia | Absolut Kufamba
Ana L. | | Ositireriya
Australia inzvimbo hombe yenyika yakakomberedzwa negungwa, ndiyo nyika yechitanhatu pakukura pasirese ine nharaunda ye7.686.850 square kilometres, kwatinowedzera nzvimbo yezvitsuwa zvayo. Uye sezvo vazhinji vachiziva vazhinji vevagari vayo vanogara mumahombekombe eguta, uye kuda kuziva, iyo Confederation yeAustralia ichiri humambo hwebumbiro, iine hurongwa hweparamende, umo Mambokadzi Elizabeth II parizvino ari mutungamiriri wenyika yeAustralia uye anoshandisa zita rakarongeka reMambokadzi weAustralia.
Kana iwe wafunga kuti chikamu chino chenyika ndiko kwaunotevera kuenda, Ini ndinokupa iwe gumi epamusoro nzvimbo dzausingakwanise kupotsa pashanyo yako kunakidzwa nekushanyirwa muAustralia. Kugadzira rondedzero ini ndinokuudza zvavari:
Yakakura Ocean Highway
Uye zvino tinoenda, mumwe nemumwe:
1 Sydney, iyo bay inovhura Australia
2 Cairns, inzvimbo inozivikanwa kwazvo
3 Gold Coast, iwo mahombekombe akakwana ekushambadzira
4 Fraser Island, Nzvimbo Yemagariro Enyika
5 Magnetic Island, chitsuwa chekushandurwa kwekambasi
6 Whitsundays Islands, kana iyo huru barrier reef
7 Ayers Dombo, ibwe revatorwa
8 Iyo huru nzira yegungwa
9 Kakadu National Park, yekare mifananidzo yevanhu
10 Tasmania, kushanya kwekushanya
Sydney, iyo bay inovhura Australia
Iyo bay ye Sydney Iyo ndeimwe yeakanaka kwazvo muAustralia, uye gedhi rechokwadi kuenda kunyika. Guta guru iguta rine vanhu vazhinji uye rakavambwa muna 1788.
Dzimwe dzenzvimbo dzausingakwanise kupotsa muguta rino rine vanhu vazhinji, nehusiku hwakakura hwakavakirwa paNewtown neAnandalele nzvimbo, ndiyo opera, iyo icon yakavakwa muna 1973 iyo yatinozivisa nayo guta, horo yeguta, Guta Recital Hall, iyo State Theatre, Theatre Royal, iyo Sydney Theatre uye iyo Wharf Theatre.
Kunze kwekushanya kwetsika, ndinokurudzira kuvira kwezuva pamusoro peBay Bridge uye narwo rwizi.
Cairns, inzvimbo inozivikanwa kwazvo
Kunyangwe Cairns iri guta diki, pagore rinogashira vangangoita mamirioni maviri evashanyi, uye inzvimbo inozivikanwa kwazvo kuvatorwa nekuda kwemamiriro ekunze ekunze uye padyo neGreat Barrier Reef isingasviki awa neigwa, Daintree National Park uye Cape Dambudziko, anenge makiromita zana nemakumi matatu.
Iyi inzvimbo yakakurudzirwa kutanga kushanya muAustralia uye kutanga pano nzira dzinoenda kuCooktown, peninsula yeCape York uye Atherton Plateau.
Gold Coast, iwo mahombekombe akakwana ekushambadzira
goridhe Coast Iri iguta pacharo, uyezve nzvimbo yemakungwa akanaka uye mafungu mahombe akakwana kushambira paPacific. Surfers vanozoziva zvakawanda pamusoro peizvi, asi ivo vanoti Snapper Rocks Superbank, padyo neCoolongatta, yakave nemafungu akakwirira kwazvo pasirese. Iwe unogona zvakare kumira kuCurrumbin, Palm Beach, Burleigh Heads, Nobby Beach, Mermaid Beach uye Broadbeach. Kuti uve nemafungu akachena uye usanyanya kuwandisa, iyo Sunshine Coast inokurudzirwa muCaloundra, Moolooloba, Maroochydore, Coolum Beach neNoosa Heads, uko masango anosvika kumucheto kwegungwa.
Fraser Island, Nzvimbo Yemagariro Enyika
Fraser Island yave iri World Heritage Saiti kubvira 1992, uye ndiyo hombe chitsuwa chejecha pasi rose pa1.630 mativi emakiromita. Zita rayo mumutauro wevaAborigine, K'gari zvinoreva paradhiso, uye sezvaungafungidzira iri. Iine yakasarudzika ecosystem, iyo yekushanya iyo yakagadzira inochengetedza runako uye zvipenyu zvakasiyana zveichi chitsuwa. Kana iwe uchizoshanyira iyo, ivo vachakupa iwe yakateedzana yemirairo iwe uripo, sekusadyisa iwo ma dingoes. Muchokwadi, chirevo chechitsuwa ndechekuti chero bedzi iwe ukaramba uri pachiri, kuvapo kwako kunofanira kunge kusingaoneke uye kusanyanya kukuvadza sezvinobvira.
Magnetic Island, chitsuwa chekushandurwa kwekambasi
Zita rayo Magnetic Island rinouya kubva riinhi James Cook muna 1770 akacherekedza kuti kambasi yechikepe chake yakashandurwa kana ichipfuura padyo, kune izvo zvaakadaidza kuti "magineti mhedzisiro", kubvira ipapo mavambo echiitiko akaferefetwa, asi hapana tsananguro yakawanikwa. Ini pachangu, ini ndinofunga kuti iyi "magineti mhedzisiro" inouya kubva kumahombekombe ayo makumi maviri nematatu uye nemazana matatu ezuva pagore, ndiani asingatenderi kuti ive nemagineti navo kana nekoalas? Uye ndeyekuti inopfuura hafu yechitsuwa chakaziviswa paki yenyika, kuchengetedza idzi mhuka.
Whitsundays Islands, kana iyo huru barrier reef
Zvitsuwa zveWhitsunday iboka rezvitsuwa makumi manomwe nematanhatu zvakapoteredzwa neGreat Barrier Reef, uye nemvura yakachengetedzwa yegungwa rekumabvazuva, mamwe acho mitsetse yejecha rakanaka kwazvo rekorari, rakabatanidzwa pamwe chete nemidzi yemuchindwe.
Iyi tropical paradhiso ndiyo yerudo yekuenda ine yakanyanya kuroorwa zvirevo uye honeymoons pa square mita, saka kana ukaronga kufamba nemumwe wako unotoziva zvinoenderana. VaAborigine vezviwi ndivo vaNgaro vari pakati pevakuru vakanyorwa muAustralia.
Ayers Dombo, ibwe revatorwa
Iyo bhaisikopo Inosangana muChitatu Chikamu (1977) yakakurisa dombo iri, dombo rakakura kwazvo pasi rese, inoyera nzvimbo yevaAborigine Aṉkurwadziwa uye ane zita rekuti Uluru.
Kuumbwa kwedombo kunokwira 348 metres pamusoro pevhu, uye 863 metres pamusoro pegungwa, kunyangwe mazhinji acho ari pasi pevhu. Rondedzero yemonolith, iyo inoshandura ruvara zvinoenderana nemaonere ezuva, anoyera makiromita 9.4. Vagari vetsika venzvimbo iyi vanoronga mafambiro akatariswa pamhuka, maruva emuno uye ngano dzechinyakare.
Iyo huru nzira yegungwa
Imwe yenzvimbo dzinojairika dzekunakidzwa nekushanya muAustralia ndiyo nzira huru yegungwa isiri chinhu chekugodora kune makumi matanhatu nevatanhatu muUnited States.
Iyo Great Ocean Route inomhanya kubva kuMelbourne kuenda kuAdelaide ichitevedza Australia yekumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kwemahombekombe, ichikwenya gungwa nemahombekombe ayo makuru. Iwe uchapfuura pakati pemapopoma nepasango rakasvibira reOtway National Park uye uchatokwanisa kuona mahavi muWarrnambool, uchipfuura nemawere eCape Bridgewater ... chenjera, nekuti iwe uchapfuurawo nekuyedza minda yemizambiringa uye wineries ne waini dzakanakisa dzeAustralia. Siya mabhodhoro aunotenga kana wasvika kwauri kuenda.
Kakadu National Park, yekare mifananidzo yevanhu
Iyo National Park Cockatoo, kuNorth, iwe unogona chete kushanyira 100% munguva yakaomaKubva muna Chivabvu kusvika munaGunyana, mumwaka wemvura hazvibviri kuwana nzvimbo zhinji. Kuwedzeredzwa kwayo kwakaenzana neiyo Nyika yeIsrael uye inofungidzirwa kuti ine gumi muzana muzana yeiyo uraniamu matura.
Chikamu chinonyanya kunakidza chepaki mafashama emvura, nemakarwe ayo egungwa nemakarwe aJohnston, ayo anotenda kurara nguva zhinji yezuva. Zvakare kucherechedzwa mapako emapako eUbirr, Nourlangie neNanguluwur inogarwa nemurume inoenderera kweanopfuura makore zviuru makumi maviri.
Tasmania, kushanya kwekushanya
Tasmania inyika yeAustralia, inoumbwa nechitsuwa chose cheTasmania uye zvimwe zviwi zvidiki zviri pedyo. Iyi nharaunda yakazara nengano dzevasungwa, mapiyona, vanotema matanda, vanochera migodhi uye, nguva pfupi yadarika, vanoita zvematongerwo enyika.
Hunhu hwayo hwemhandara, gastronomy uye waini zvinoonekera, nemaguta madiki ane mweya wakachena. Tasmania yekumaodzanyemba kwemahombekombe iguru kune zororo rekushanya, ichidzika nekukwira kweRwizi rweFranklin. Ndinoda pfungwa yechitima chenhoroondo kubva kuQueenstown.
Ndeapi nzvimbo aungakurudzira ekuona nzvimbo muAustralia? Unogona here kuwedzera imwe yeaya atataura? Tisiye ruzivo rwako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Tourism muAustralia
henry rudas miranda akadaro
Mhoro ini ndinogara muBarranguilla Colombia muSouth America uye ndaona nzvimbo dzevashanyi dzeAustralia uye ndinofunga nzvimbo nenzvimbo dzemabhishi zvinoita kunge zvinoshamisira zvekuti ndaona kukwazisa kuvanhu vako
Pindura kuna henry rudas miranda
maris valentina akadaro
Yaive yakanakisa rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr kuenda kuChinaaaa
Pindura kuna maris valentina
Icho chaive chinhu chakanakisa kuenda kuAustralia, ndaichifarira zvakanyanya.